RT-qPCR EasyTM I (One Step) ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ |တရုတ် RT-qPCR EasyTM I (One Step) ထုတ်လုပ်သူများ
RT-qPCR အလွယ်ᵀᴹ (တစ်လှမ်း)-SYBR Green I
◮One-step kit သည် reverse transcription နှင့် qPCR နှစ်ခုကို တူညီသော tube တွင် တုံ့ပြန်မှုများ ပြုလုပ်ပေးသည်၊၊ template RNA၊ သီးခြား PCR primers နှင့် RNase-Free ddH တို့ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။2O.
◮ကိရိယာသည် ဗိုင်းရပ်စ် RNA သို့မဟုတ် ခြေရာခံ RNA ကို လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်စွာ ပမာဏခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
◮RT-qPCR လွယ်ကူသည်။TM(အဆင့်တစ်ဆင့်)-SYBR Green I အစုံတွင် ROX အတွင်းပိုင်းရည်ညွှန်းဆိုးဆေးပါရှိပြီး ရေတွင်းများကြားတွင် အချက်ပြနောက်ခံနှင့် အချက်ပြအမှားအယွင်းများကို ဖယ်ရှားပေးကာ သုံးစွဲသူများအတွက် အရေအတွက် PCR တူရိယာမော်ဒယ်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေမည့် ROX အတွင်းပိုင်းရည်ညွှန်းဆိုးဆေးပါရှိပါသည်။
RT-qPCR အလွယ်ᵀᴹ (တစ်လှမ်း)-Taqman
- တစ်ခု-step kit သည် reverse transcription နှင့် PCR ကို တူညီသော tube တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်၊၊ template RNA၊ သီးခြား PCR primers နှင့် RNase-Free ddH တို့ကိုသာ ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။2O.
- ဗိုင်းရပ်စ် RNA သို့မဟုတ် ခြေရာခံ RNA ၏ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပမာဏခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လျင်မြန်တိကျစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
- ပစ္စည်းကိရိယာသည် ထူးခြားသော Foregene ပြောင်းပြန် စာသားပြောင်းပြန်ဓါတ်ဆားနှင့် Foregene HotStar Taq DNA Polymerase တို့ကို အသုံးပြု၍ တုံ့ပြန်မှုစနစ်၏ ချဲ့ထွင်မှုထိရောက်မှုနှင့် တိကျမှုတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
- ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော တုံ့ပြန်မှုစနစ်သည် တုံ့ပြန်မှုကိုပိုမိုမြင့်မားသောသိရှိနိုင်မှုအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ပိုမိုအားကောင်းသောအပူတည်ငြိမ်မှုနှင့်သည်းခံနိုင်စွမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
- RT-qPCR လွယ်ကူသည်။TM(တစ်လှမ်း)-Taqman အစုံတွင် ROX အတွင်းပိုင်းရည်ညွှန်းဆိုးဆေးပါရှိပြီး၊ ၎င်းသည် ရေတွင်းများကြားတွင် အချက်ပြနောက်ခံနှင့် အချက်ပြအမှားများကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် အရေအတွက် PCR တူရိယာအမျိုးမျိုး၏ မော်ဒယ်များတွင် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေစေသော၊